ဝေမျှမယ် Apps ကပ APK ကို Download လုပ်ပါ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » ဝေမျှမယ် Apps ကပ
ဝေမျှမယ် Apps ကပ APK ကို
သင်တစ်ဦး App ကိုသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ကို install တစ်စုံတစ်ဦးကပေးပို့ဖို့ကြိုးစားနေပါသလား? App ကိုဝေမျှမယ်သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ် installed apps များမျှဝေသင်၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ် backup လုပ်ထားသူတို့ကိုအထိသူတို့ကိုပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြု, သင် play Google မှာ၎င်း၏ installation ကိုလင့်ခ်ဖြင့်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက် APK ဖိုင် (App ကိုအောက်က Installer ဖိုင်) .App မျှဝေအားဖြင့်ဖြစ်စေ app တစ်ခုဝေမျှနိုင်ပါတယ် ဝေမျှမယ်သင့်ရဲ့ app များကိုဝေမျှဖို့အများကြီးနည်းလမ်းများပေးပါသည်, သင်စသည်တို့ ... တစ်ဦးကို Message, Email, ဘလူးတုသ်, WhatsApp ကို Facebook က Messenger ကိုပြုလုပ်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့် app တစ်ခုဝေမျှနိုင်ပါတယ် ..
App ကိုဝေမျှမယ်သင်တို့ကိုလည်းချက်ချင်းသူတို့ကိုပေးပို့ခြင်းကိုစတင်ရန်အများအပြား apps များနှင့် tab ကိုရှယ်ယာ button ကို select လုပ်နိုင်အောင်အချိန်မျိုးစုံ app များကိုဝေမျှထောက်ခံပါတယ်ကြောင့်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူသင်ပို့လိုသော apps များတွေ့ပါရန်သင့်အားဖွင့်ချက်ချင်း apps များရှာဖွေရေးထောက်ခံပါတယ်။
1-, အီးမေးလ်ကို အသုံးပြု. ဘလူးတုသ် apps များပေးပို့ခြင်း Messenger ကိုသို့မဟုတ်သောသင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြု installed သမျှ app ကိုထောက်ခံပါတယ်။
2- သင်သည်အလျင်အမြန်သင်ပို့ချင်သော app ကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့ချက်ချင်းရှာဖွေရေးထောက်ပံ့ပေးသည်။
4- မျှဝေမှုဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ app ကိုသင်ခန်းစာပါဝင်သည်။
5- သင်ဘလူးတုသ်ကို အသုံးပြု. လျင်မြန်စွာ apps များပေးပို့ခွင့်ပြုသည်။
1 ။ သငျသညျ apps များပေးပို့ခြင်းခင်သင်ကသင့်လျော်ပြန်လည်ခွဲဝေမှုခွင့်ရှိသည်သေချာပါစေ။
2 ။ ဒီ app ကို Dropbox သုံးပြီးခွဲဝေမှု APK ကိုထောကျပံ့နိုင်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းရန် "ကို Dropbox" လိုအပ်သည်။
နယူးအင်္ဂါရပ်များနှင့် Android Oero နှင့်အတူလိုက်ဖက်မှု
6.91 ကို MB